विश्व क्रिकेटमा नेपाली क्रिकेटले बनाएका ईतिहास - Damak No.1 Online Patrika
२ बलमा लक्ष्य भेट्ने देखी ८ मेडनसम्मको रेकर्ड
बिर्तामोड । नेपाली क्रिकेट अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पाईला चालेको लामो ईतिहास नभएपनि यसबिचमा नेपाली क्रिकेटका केहि नाम गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा दर्ज भएका छन् । त्यत्ति मात्र होईन, नेपाली खेलाडीले बनाएका केहि रेकर्ड ब्रेक पनि नहुने अवस्थामा छन् ।
कस्ता थिए त नेपाली क्रिकेटका विश्व रेकर्ड :
१. मेहबुव आलमको १० विकेट
तिब्र गतिका बलर मेहबुव आलमको नाममा रहेको विश्व रेकर्ड विश्वका ठुला क्रिकेट खेल्ने राष्ट्रका बलरले पनि तोड्न सक्दैनन् । आईसीसी बल्र्ड क्रिकेट लिग डिभिजन पाँचमा मोजाम्बिकबिरुद्ध उनले १२ रन खर्चर हात पारेको १० विकेट गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा दर्ता छ । सन् २००८ मा उनले यो सफलता पाएका थिए । टेष्ट क्रिकेटमा ईङल्याण्डका जिम लाकेर र भारतका अनिल कुम्बलेको नाममा १० विकेट रहेपनि वन डे क्रिकेटको ईतिहासमा भने आलम मात्र १० विकेट लिने क्रिकेटर हुन् ।
२. म्यानमारलाई १० रनमा अलआउट :
एसीसी कप क्रिकेट २००६ मा नेपालले अर्को ऐतिहासिक रेकर्ड बनायो । कमजोर प्रतिद्धन्दी म्यानमारलाई १० रनमा समेट्दै विश्व क्रिकेटमा अर्को दुर्लभ किर्तिमान नेपालले आफ्नो नाममा लेखाएको थियो । म्यानमारलाई सातौ ओभरमा १० रनमा समेट्ने क्रममा मेहबुब आलमले ३ रन खर्चेर ७ विकेट लिएका थिए भने बिनोद दासले ४ रन खर्चेर ३ विकेट हात पारेका थिए । ११ रनको लक्ष्य नेपालले मात्र २ बलमा पुरा गरेर सबैभन्दा छोटो क्रिकेटको रुपमा किर्तिमान कायम गरेको थियो ।
३. शक्ति गौचनको ८ मेडन :
आईसीसी वल्र्ड क्रिकेट लिग डिभिजन चारमा मलेसियाबिरुद्धको खेलमा नेपालका शक्ति गौचनले अर्को रेकर्ड बनाए । सन् २०१२ मा भएको खेलमा शक्तिले १० ओभर बलिङ गर्दै ८ मेडन राखी मात्र २ रन खर्चेर ३ विकेट हात पारे । विश्व क्रिकेट ईतिहासमा यो हालसम्मकै किफायती बलिङ हो ।
५. विश्वकपको प्लेट च्याम्पियन बन्ने पहिलो एसोसिएट राष्ट्र :
नेपाल अण्डर १९ विश्वकपको प्लेट च्याम्पियन बन्ने पहिलो एसोसिएट राष्ट्र पनि हो । २००६ मा भएको प्रतिस्पर्धामा बलियो टोली न्युजिल्याण्डलाई हराउदै नेपालले किर्तिमानी उपलब्धी हात पारेको थियो । आईसीसीको कुनैपनि आधिकारीक प्रतियोगितामा एसोसिएट राष्ट्रले हात पारेको यो उच्च सफलता हो ।
६. दशौ नम्बरका ब्याट्सम्यानको नाममा ४० रन :
टी–२० अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालका सोमपाल कामीले १० औ नम्बरमा ४० रन बनाउदै अर्को ऐतिहासिक उपलब्धी हात पारेका छन् । हङकङबिरुद्धको खेलमा सोमपालले ३१ ब्लमा ४० रन बनाउदै अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा महत्वपुर्ण सफलता हात पारेका हुन् । यद्यपी नेपाल सो खेलमा पराजित भएको थियो ।
७. अर्धशतक बनाउने कान्छा खेलाडी :
नेपालका रोहित पौडेलले अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा अर्धसतक बनाउने सबैभन्दा कम उमेरका ब्याट्सम्यान हुन् । संयुक्त अरब एमिरेट्ससँग गत माघमा भएको एक दिवसीय क्रिकेट खेलमा रोहितले ५८ बलमा ५५ रन बनाउदै कान्छो अर्धशतकधारी खेलाडी बनेका हुन् । उनले ७ चौका प्रहार गर्दै विश्वचर्चित ब्याट्सम्यानको नाममा रहेको रेकर्ड ब्रेक गरेका हुन् । यसअघि यो रेकर्ड भारतका सचिन तेन्दुलकरको नाममा थियो । सचिनले पाकिस्तानविरुद्धको टेष्ट खेलमा ५९ रन बनाउँदा उनी १६ वर्ष २ सय १३ दिनका थिए । रोहितले १६ वर्ष १ सय ४६ दिनको उमेरमा विश्व किर्तिमान बनाएका हुन् ।